Fampiharana ny fihibohana :: Miha mihenjana tanteraka ny fanjakana • AoRaha
Nanomboka, omaly, ny fandraisan’ny mpitandro ny filaminana fepetra hentitra manoloana ny tsy firaharahan’ny sokajin’ olona sasany ny fepetra fihibohana any an-trano eto Antananarivo renivohitra, ho fisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina “Covid-19”. Nampiasa fomba mahery ny mpitandro ny filaminana. Nipetraka ny sakana tamin’ireo lalan-dehibe maro, hatramin’ireo miditra sy mivoaka ny renivohitra mihazo ny lalampirenena. Mampihenjana ny fitondram-panjakana, ankehitriny, ny fisian’ ilay tranga iray nahatiliana olona mararin’ny Coronavirus, kanefa tsy isan’ireo mpandeha fiaramanidina tonga avy any ivelany.
Nipoaka voalohany ny baomba mandatsa-dranomaso teny amin’ny sampanandalana teny Anosizato, omaly antoandro, noho ny tsy fanarahana ny toromarika mandrara an’ireo mponina tsy hivoaka ny trano. Avy tamin’ny fitangorongoronana nataon’ andian’olona tsy hay nalamina no nandraisan’ny mpitandro ny filaminana an’io fepetra io. »Fepetra no hampiharina fa tsy mbola misy ny toromarika vaovao hafa », hoy ny loharanombaovao iray avy eo anivon’ny fitandroana ny filaminana. Ambivitra ihany koa ny tsy nisian’ny tranga toy ny teny Anosizato tamin’ireo toerana sasany manodidina an’ Antananarivo renivohitra. Isan’izany ny teny Mahavoky Besarety sy teny amin’ireo arabe mivoaka ny lalam-pirenena. Tsy handefitra intsony ny mpitandro ny filaminana, manomboka anio. Ho voafetra avokoa ny fivezivezen’ ny olona , na ireo mandeha fiara na mandeha an-tongotra, na amin’ny antoandro aza.
Maro ireo kihon-dalana nahitana sakana nataon’ny mpitandro ny filaminana, omaly. Voasakana tsy nahazo nandeha intsony ireo fiara, rehefa tsy tena nazava ny antondiany. Tsikaritra izany teny Antanimena sy ny teny Ampitatafika ary ny faritra hafa. Taorian’ny toromarika hentitra nataon’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana,Tianarivelo Razafimahefa izay sady mitarika ny ivon-toerana fibaikoana ny ady amin’ ny »Covid-19″, omaly tolakandro, dia nihahenjana ireo mpitandro ny filaminana tamin’ny fanakanana an’ireo mponin’ Antananarivo amin’ny fanajana ny fepetra fihibohana any an-trano.
“Aoka isika tsy hivoaka ny trano intsony raha tsy misy antony tsy maintsy hanaovana an’izany. Havoaka avokoa ireo miaramila hampody an’ireo mihoa-pefy ”, hoy ny minisitra nandritra ny fidirana mivantana tamin’ireo haino amanjery rehetra manerana an’i Madagasikara.
“Tsotra ny fisorohana dia ny fijanonana ao an-trano ihany. Sanatria, tsy misy te hampiasa hery amin’ny mpiray tanindrazana eto. Aoka kosa anefa isika hanaraka ny fitsipika napetraka”, hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Richard Rakotonirina.
Fepetra fisorohana :: Ampiasana fanafody mahery vaika ny fanadiovana eto an-drenivohitra